Ifulethi elithulile elinezitezi phezulu emahlathini amade. - I-Airbnb
Ifulethi elithulile elinezitezi phezulu emahlathini amade.
Ifulethi Egalaji elinendawo yokungena ehlukile. Ikamelo lokulala elilodwa nomatilasi womoya omude weNdlovukazi otholakalayo ulala abantu abadala abangu-2 kuya kwabangu-4. Ikhishi eligcwele elinekhofi netiye. Izitebhisi zokungena efulethini kanye nokupaka izimoto ne-trailer ye-ORV yakho noma amathoyizi. Ngaphakathi kwamamayela angu- ukusuka ku-Golf Course yomphakathi kanye nohla lokushayela. Imizila ye-ORV, imizila yokuqwala izintaba, ukuhamba ngebhayisikili, nemizila yokugibela amahhashi konke kuphakathi komakhelwane bethu. Indawo enhle ye-Pinetop Country Club enezihlahla ze-pine, umthunzi, kanye ne-breezes epholile.
Sinendawo yokupaka etholakalayo ye-trailer uma uhamba nama-ORV akho ngitshele ngaphambi kwesikhathi. Sine-Jacuzzi esayithini kodwa ayisebenzi ngalesi sikhathi. Sicela ungavimbeli indlela yokungena imoto lapho upaka, donsa yonke indlela eya ocingweni ukuze uvumele ezinye izimoto ukuba zingene futhi ziphume. I-Roku TV ne-Dish Channel ziyatholakala ukuze uzijabulise. Siphinde sibe nomgodi womlilo nendawo yokuhlala ngaphandle ukuze uyisebenzise. Ngesicelo sinendawo enkulu yokugaya igesi ongayisebenzisa kuvulande oyinhloko wendlu.
Indawo yangakithi inezihlahla ezinde ze-pine futhi inomthunzi omuhle. Sinendawo yokudlala igalofu yomphakathi eceleni komgwaqo enezinhlobonhlobo zokushayela. Phakathi nebanga lokuhanjwa ngezinyawo, ungabhukha ukugibela umzila wokugibela ihhashi. Uma une-ORV ungapaka i-trailer endlini yefulethi futhi ufinyelele imizila eminingi ye-ORV. Ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngebhayisikili entabeni, nokufinyelela emzileni wamahhashi konke kuphakathi nendawo esikuyo. Imizuzu engu-5 yokuhamba ngemoto ukuya edolobheni, ama-bar, izindawo zokudlela, nezitolo zokuthenga.
Ngitholakala uma udinga noma yiluphi usizo phakathi nokuhlala kwakho. Sihlala endlini eyinhloko egcekeni. Ngishiye imininingwane yami yenombolo kamakhalekhukhwini encwadini yokwamukela ozoyithola efulethini. Ngicela ungithumelele umyalezo kunokuba ngicindezele eminyango yethu njengoba ngezinye izikhathi ngingeke ngikuzwe futhi umama wami usekhulile futhi akakwazi ukuphendula umnyango ngokwakhe. Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho ngenkathi ulapha futhi uthanda okufanayo nawe. Uma ngingaphandle ngingajabula kakhulu ukuxoxa noma ukuphendula imibuzo! Siyabonga kakhulu!
Ngitholakala uma udinga noma yiluphi usizo phakathi nokuhlala kwakho. Sihlala endlini eyinhloko egcekeni. Ngishiye imininingwane yami yenombolo kamakhalekhukhwini encwadini yokwamu…